10 loại cây dây leo đẹp, chịu nắng tốt và dễ trồng nhất | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
10 loại cây dây leo đẹp, chịu nắng tốt và dễ trồng nhất | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: 10 loại cây dây leo đẹp, chịu nắng tốt và dễ trồng nhất | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Iimvini zizityalo ezikhethekileyo ezisetyenziselwa ukuhombisa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo zokwakha eVietnam njengezityalo zokuhombisa. Eli qela lezityalo libandakanya iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zemidiliya, kuquka iintyatyambo. Umthi ngamnye unobuhle bawo, umthi ngamnye unobuhle bawo obahlukileyo. Namhlanje, makhe sifunde ngeempawu kunye neyona nto intle kakhulu, kulula ukuyikhulisa imidiliya!
1 Intshayelelo yeediliya
1.1 Iimpawu zokunyuka kwezityalo
1.2 Iziphumo zokunyuka kwezityalo
2 Iintyatyambo ezili-10 ezintle kakhulu, ezikwaziyo ukumelana nelanga kwaye kulula ukuzikhulisa
2.1 intyatyambo emva kokufa
2.2 Imifuno yasebukhosini
2.3 Iintyatyambo zephepha
2.4 Ukunyuka komthi werozi
2.5 I-chrysanthemum yaseIndiya
2.6 Iitigon zeentyatyambo
2.7 Intyatyambo yeCanary apricot
2.9 intyatyambo ye-honeysuckle
2.11 I-betel nut – umdiliya ongadingi ilanga
3 Indlela yokukhulisa nokukhathalela imidiliya
Ngoku ka isichazi-magama sezityalo zehlabathi, iidiliya liqela lezityalo ezinophawu lwesiqu somthi ezikhula emhlabeni kwaye zikhwele kweminye imithi, iindonga, iingcingo okanye ezinye izakhiwo ezithe nkqo. Izityalo zihlelwa njengemidiliya hayi ngenxa yokuba zizalana enye kwenye, kodwa ubukhulu becala iindidi zeentsapho ezohlukeneyo kodwa zinendlela yokukhula efanayo.
Iindidi zemithi yomdiliya zohlulwe ngeempawu ezahlukeneyo zokukhula. Ngokomzekelo, iidiliya zodonga, iziqhamo zeziqhamo, iintyatyambo zeentyatyambo, njl.
Iimpawu zokunyuka kwezityalo
Imithi yomdiliya inokuqina okuqinileyo, ukukhula ngokukhawuleza kunye nokukhula. Iimvini zokuhombisa zihlala zineempawu zokubambelela kakuhle kunye nokubamba ngokuqinileyo kwiintsika, ngakumbi imidiliya eqengqelekayo kunye ne-balcony, njl.
Njengesityalo esiziqhelanisa kakuhle neemeko ezininzi ezahlukeneyo zokusingqongileyo, uninzi lweediliya zokuhombisa ziyakwazi ukunyamezela imbalela okanye imvula enkulu, ubushushu okanye ukubanda, njalo njalo, ke ezi zikwaziwa njengemidiliya ekulula ukuyikhulisa.
Ingaba imidiliya inazo iintyatyambo? Ngokuxhomekeke kwiimpawu zesityalo ngasinye, kuya kubakho izityalo ezineentyantyambo okanye akunjalo, Iintyatyambo ziyahlukahluka ngobukhulu, imibala eyahlukileyo kunye neyombala kwimvelaphi yamagqabi aluhlaza.
Iziphumo zokunyuka kwezityalo
Kutheni le nto iidiliya zithandwa kwaye zikhula ngokuthandwa? Ngokuqinisekileyo azibahle nje kuphela, kodwa zikwanazo nezinye izinto ezininzi ezisetyenziswayo.
Imivini emihle idla ngokutyalwa ukuhlobisa i-terraces, iibhalkhoni, iingcingo, amasango, njl.
Kukho imidiliya ezisa umthunzi egadini, okanye imidiliya yeziqhamo. Ukongeza, iidiliya zangaphakathi zenza iimpawu ezizodwa kunye nokuphola kwendawo.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, iidiliya zinefuthe lokunciphisa ubushushu ngaphandle, ukulinganisa ukufuma, ukucocwa kunye ne-air conditioning. Yenza indawo entsha, epholileyo kwaye ekhululekile, eqinisekisa impilo yomntu wonke.
Ngaphandle kwexabiso lobuhle, abantu bakwakhula imidiliya ngokwefeng shui. Uhlobo ngalunye lwemidiliya luneentsingiselo ezahlukeneyo ze-feng shui. Kodwa uninzi lwazo luzisa amandla amahle, inhlanhla kunye nethamsanqa kumninikhaya, ngakumbi ukuba umlimi ukhetha umthi ohambelana nekamva lakhe.
Iintyatyambo ezili-10 ezintle kakhulu, ezikwaziyo ukumelana nelanga kwaye kulula ukuzikhulisa
intyatyambo emva kokufa
IWisteria yenye yeentyatyambo ezintle kakhulu. Umthi wewisteria unamagqabi ambalwa, iintyatyambo ezininzi, kwaye xa umdala, isiqu siya kujika sibe ngumthi. Amagqabi anqabileyo, amfusa, afanekisela ukunyaniseka othandweni.
IWisteria ikhula kwaye ikhule ngamandla, iqhelana neemeko ezininzi zemozulu, kodwa ikakhulu ithanda ukukhanya kwelanga kwaye inokunyamezela imbalela. Umthi uqhakaza ehlotyeni, umbala omfusa uqhakaza ngokukhazimulayo, udala ukugqwesa okuhle kwendawo.
Iintyatyambo zeWisteria zithandwa ngokutyalwa ngabantu njengemidiliya yeebhalkhoni, imidiliya yocingo, okanye kumasango endlu, amabala egadi, njl.
I-Rhododendron ngumdiliya okhule kakhulu. Intyatyambo ikwabizwa ngokuba yintyatyambo eqaqambileyo. Iintyatyambo ezi-5-petaled ezincinci, ezikhanyayo zikhula kwiziqu ezide kwaye zibukeka zifana kakhulu neenyibiba ezincinci. Umbala oqaqambileyo otyheli weentyatyambo unamachokoza ngasemva kumagqabi aluhlaza bumnyama, ezisa ubuhle nombala obalaseleyo. Yenza indawo eqaqambileyo, ekhangayo kwaye yodwa. Ngokukodwa, iintyatyambo zasebukhosini zinentsingiselo ethile yobuhlobo, ubuzalwana obusondeleyo kunye nokunamathela.
IBougainvillea ngumdiliya omhle, ekulula ukuwukhulisa, umdiliya webalcony, kwaye ukhule kakhulu eVietnam. Esi sisityalo somthi, sinameva amancinci emasebeni. Amagqabi mancinci kwaye aluhlaza bumnyama. Amagqabi acekeceke kwaye alula okwephepha adityanisiwe kwaye anemibala emininzi eyahlukeneyo enjengopinki, omhlophe, obomvu, orenji, notyheli. Ukuba phezulu kweyona midiliya ilula ukukhula kuba ayifuni kukhathalelwa kakhulu.
I-bougainvillea idubula kakhulu ehlotyeni kwaye idla ngokutyalwa ngokuhombisa kwibalcony, ikhwela kucingo lwesango, njl njl. Umthi awuzisi nje ubuhle bendalo obuqaqambileyo endlwini kodwa unefuthe lokufunxa uthuli kunye nokucoca umoya. . Nceda ugcine indawo yokuhlala esingqongileyo ihlale intle kwaye icocekile.
Ukunyuka komthi werozi
Ngokubhekiselele kwimidiliya yangaphakathi, ukukhwela iirozi kufuneka kukhankanywe ngokuqinisekileyo. I-Climbing rose ngumdiliya ekulula ukuwukhulisa, okhula ngokukhawuleza kwaye ungumdiliya olungileyo okwaziyo ukumelana nelanga. Isityalo sinokuziqhelanisa neemeko zemozulu ezahlukeneyo, kwaye siqhakaza unyaka wonke ngononophelo olulungileyo.
Umahluko kukuba isityalo asiniki nje iintyatyambo ezintle, kodwa kunye nemidiliya enevumba elimnandi. Ngoko ke, iintyatyambo zityalwe kwiidiliya ezininzi ezintle kwiibhalkoni, igadi, iingcingo, njl.
I-chrysanthemum yaseIndiya Elinye igama yi-bamboo curtain, yimithi yokuhombisa ekulula ukuyikhulisa kunye nesityalo esibambelela eludongeni esithandwa kakhulu. Lo mthi unamandla omelele, uluhlaza unyaka wonke. Umthi udla ngokukhuliswa njengomthi we-balcony, kuba umthi ukhula kwaye unwenwe, amasebe amade asondelene abe ngumkhusane omkhulu oluhlaza phambi kwendlu.
I-trunk inamasebe amaninzi, amasebe amaninzi, athambileyo kwaye athambileyo, xa sele ekhulile ajika abe yinkuni kwaye ajike ukusuka eluhlaza ukuya kumdaka. Lo ngumdiliya omncinci, omnyama oluhlaza ongafane uwe unyaka wonke. Iintyatyambo zechrysanthemum ezincinci, ezipinki ezikhanyayo, intyatyambo nganye inamagqabi amahlanu kumaqela agqamileyo ngokuchasene nemvelaphi yamagqabi aluhlaza. Isiqhamo se-chrysanthemum yaseNdiya sibukeka njengepentagon kwaye sinombala obomvu okhanyayo.
I-Chrysanthemums ine-plus point kunezinye iidiliya ezininzi zangaphakathi ngenxa yokuba umthi awukhuli iingcambu zecala, ngoko xa ukhuphuka, awuyi kungcolisa iindonga, kwaye awuyi konakalisa i-architecture yendlu.
Iintyatyambo zeTigon okwangoku zingomnye wemidiliya emihle ekhule kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo ezifana neebhalkhoni, iingcingo, amasango endlu, njl njl. Isityalo sikwimo yeentyatyambo ezinqabileyo ezikhwelayo, amagqabi amnyama aluhlaza, iinqumle kunye nokukhula okulula. Iintyatyambo zeTigon zimile okwentliziyo, zidubula ngendlela yamaqela ajingayo. Amagqabi apinki athambileyo kodwa agqame kakhulu kwaye anomtsalane.
Ukutyala imivini phambi kwendlu kuya kudala indawo yokuhlala enhle, ukuzisa induduzo kunye nokuphumla kuwe. Akunjalo nje ukudala imbalasane yendlu, intyatyambo ye-tigon – i-balcony ekhwela intyatyambo ikwanayo nentsingiselo ye-feng shui xa izisa uvuyo, ithemba, umoya okhululekileyo kwaye luphawu lothando olunzulu noluhlala luhleli.
Intyatyambo yeCanary apricot
Iintyatyambo zeCanary apricot kulula ukuziqhelanisa, azikhethi malunga nomhlaba kwaye kulula ukukhula nokunyamekela. Isiqu sikhula kwiibhantshi ezininzi ezinamagatsha, simdaka ngebala kwaye sinamagqabi aluhlaza apholileyo. Iintyatyambo zeCanary apricot zinokukhula kwiindawo ezininzi ezifana neebhalkoni, iingcingo, i-pergolas okanye amasango, njl.
Ngombala otyheli oqaqambileyo, oqhakaza unyaka wonke, iintyatyambo ezikhwela i-canary balcony zihlala zenza i-accents kwaye zonyusa ubuhle obukhethekileyo bendawo yokuhlala.
Xa ukhulisa imidiliya ekwaziyo ukumelana nelanga, akunakwenzeka ukuba ungayithethi i-ivy, sisityalo esinyukayo, esincinci kodwa somelele. Isiqu sinamaqhuqhuva amaninzi kwaye yindawo apho amagqabi aphuhlayo kwakunye nendawo apho iingcambu zesixhobo sokukhwela zikhula khona. Amagqabi e-Ivy ajongeka afana namagqabi omdiliya, kodwa njengoko isityalo sikhula amagqabi aya kutshintsha ukusuka eluhlaza okukhanya ukuya kumnyama.
Ekuqaleni kwekwindla lixesha apho iintyatyambo ziqhakaza ngokupheleleyo, iintyatyambo ezinamabala amahlanu zibukeka njengeeambrela ezincinci, zinombala otyheli okhanyayo kwaye zinevumba elithozamisayo, elimnandi. Isiqhamo se-ivy siphuzi kwaye sibomvu, kwaye siqhakaza malunga neenyanga ezi-1-2 emva kokudubula.
Ungabhekisa kwezinye iidiliya ezikhula lula ezineempawu ezininzi ezifana ne-ivy ezifana namacikilishe akhwela eludongeni.
I-Honeysuckle i-shrub, i-stem yokukhwela, kungekhona imivini ethanda umthunzi, kodwa ithanda ilanga. I-Honeysuckle izisa izinto ezintsha kunye nomahluko ngenxa yokungafani kwayo xa umbala wentyatyambo utshintsha ngokuhamba kwexesha, iintyatyambo zimhlophe kusasa kodwa emva kwemini, iintyatyambo zigolide. Ivumba leentyantyambo elimnandi lilula kakhulu, limnandi kodwa linomtsalane kakhulu.
I-Honeysuckle ayihombisi kuphela okanye izise umoya opholileyo nococekileyo, kodwa ikwayenye yamayeza axabisekileyo anokunyanga izifo ezininzi.
Ke ngoko, iintyatyambo ze-honeysuckle zihlala zityalwa ukwenza ikhethini ejinga kwibalcony, okanye inyuke isango ukwenza ubuhle obukhethekileyo.
Ngaphandle kwe-honeysuckle, kukho isityalo esiqhelekileyo kwi-bonsai, ebizwa ngokuba yi-honeysuckle, kodwa ngokungafaniyo ne-honeysuckle, sisityalo esinyukayo, le yi-bonsai yedeskithophu.
Ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa xa umdiliya uvela kwakhona kweli nqaku, kodwa le ngenye yeziqhamo zeziqhamo ezingasetyenziselwa ukuhlobisa igadi yangaphakathi. Umdiliya ukwiqela lezihlahla ezihlala ixesha elide, ezihlala zikhwela kweminye imithi okanye ematyeni.
Amagqabi omdiliya mahle kakhulu, amagqabi makhulu kwaye alungelelene, akhangeleka njengemilo yentliziyo ethandekayo. Iidiliya zimnandi kakhulu, ziluhlaza okanye zimfusa ngokuxhomekeke kudidi. Umdiliya uyalithanda ilanga, ngoko unokutyalwa kwindawo enelanga, kodwa kufuneka igqunywe.
Umdiliya utyalwe kakhulu kungekuphela nje ngenjongo yokuvuna isiqhamo, kodwa unokuhombisa kwaye uhombise ukudala indawo yokuhlala eluhlaza kunye nekhululekile kumntu wonke.
I-betel nut – umdiliya ongadingi ilanga
Ngaphandle kwemidiliya edinga ilanga njengale khbvptr ikhankanywe ngasentla, ibetel nut ngumdiliya ongadingi langa kwaye unokukhuliswa kakuhle kakhulu ngaphakathi. Umthi webetel nut unelinye igama, umdiliya ongapheliyo, unemiphumo emininzi njengokucoca umoya, ukuhombisa ingaphakathi lendlu. Lomdiliya kulula kakhulu ukuwukhulisa. Abadlali bemithi badla ngokubeka ibetel nut kwiimbiza ezijingayo ezibekwe phezu kwetafile okanye zijinga kwi trellis ukuze umthi uwe phantsi kakuhle kakhulu.
Indlela yokukhulisa nokukhathalela imidiliya
Indlela yokukhulisa imidiliya ngaphakathi ilula kakhulu kwaye ingakhuliswa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo. Akuyimfuneko ukukhulisa umdiliya kwiimbiza kodwa unokutyalwa egadini, ukunyuka kucingo lwesango okanye ukukhula kweediliya kwi-terrace, balcony, njl.
Zininzi iindlela zokusasaza imidiliya, njengoko izityalo ezininzi zinokukhuliswa kwimbewu. Okanye ezinye izityalo zilula ukusasaza nje ngokusika.
Ngokuxhomekeke kwindawo yemithi yeediliya, unokwenza lula ukuyila izixhobo zokuxhasa izityalo ngendlela enobuchule. Kwaye ukukhusela umthi ekukhuleni kakuhle, kufuneka usebenzise i-bamboo ukwenza i-truss endaweni yezinto zetsimbi ezifana nentsimbi, isinyithi, i-zinc.
Ngokumalunga nokunyamekela, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo kumlinganiselo wokunkcenkceshela imihla ngemihla ukuphepha ukuba umthi wome Imbalela okanye ukugcwala kwamanzi kunciphisa ukukhula kwesityalo, de ekugqibeleni sife.
Ukuze imidiliya ikhule kwaye ikhule ngokukhawuleza, kufuneka ufake izichumisi eziphilayo okanye ezingaphiliyo kwizityalo. Akuncedi nje ukuba amagqabi akhule, aphucule i-photosynthesis, kodwa inika ingqwalasela kwinqanaba lesityalo malunga neentyatyambo kunye neziqhamo. Nini Isichumisi, kufuneka uchume malunga ne-10-15cm ukusuka ezingcanjini ukunqanda ukubangela ubushushu nokufa kwezityalo.
Ukongeza, kufuneka ugawule rhoqo amasebe amancinci eengcambu, amasebe amthubi okanye izinambuzane ezitshabalalisayo ukwenza umthi ukhule ngcono, unomoya kwaye ube mhle ngakumbi.
Ngentla yi-10 ephezulu kakhulu kwaye kulula ukuyikhulisa imidiliya endiphande kwaye ndabelana ngayo. Ndiyathemba ukuba ulwazi malunga neempawu, indlela yokukhulisa kunye nendlela yokunyamekela iidiliya ziya kuba luncedo kubafundi!
>> Bona ngakumbi: Iindidi ezingama-99 zezityalo zokuhombisa ezintle nezilula ukuzikhulisa emakhayeni nasezitiyeni.
Cây Dây Leo Trồng Ban Công Nhà Phố Thêm Tươi Mát | Hatgiongtihon.net
Cây Lêkima (Trứng Gà) – Hoàng Long Garden | Hatgiongtihon.net